Shiinaha oo aan laga aqoonin warshadda cagaaran iyo soosaarayaasha | ShiningPlast
Waxaan leenahay 6 khad oo loo yaqaan 'PP' spun-bond 'oo ah soosaarista dharka aan laga tolanayn oo leh awoodda soo saarista dharka aan xirnayn ee midabbo iyo cabbirro leh 8 illaa 250gsm iyo 3.2m (ugu badnaan) ballac, awoodda sannadlaha ah ayaa gaareysa 12,000 oo tan.
Miisaanka Wejiga: 10-250gsm
Qalabka: Spp-isku xidhay PP (SBPP)
Nooca: S, SS
Midab: Midabada Madoow ama Panton
Qaababka: Boorsooyinka Xirmay / Shey / Xadhka Hoodhawe.
ShiningPlast sidoo kale waxay diirada saareysaa soo saarida dharka dhirta lagu qurxiyo sanado. Waxay ka dhigtaa dhirtaada diiran oo ay awood u yeelan karto inay si fiican u neefsato. Sidookale, waxay ka hortagtaa haramaha inay si xun u koraan. Dharka xakameynta dhirta / haramaha ee ShiningPlast wuxuu leeyahay xoog xoog leh, cimri dheer iyo dhismayaal bullaacad aad u wanaagsan. Sidoo kale waxay leedahay heerka awood sare oo ahaanshaha xoogna u leh adeegsiga muddada dheer. 'ShiningPlast nonwoven' wuxuu leeyahay meelayn xitaa fiber ah oo waxaad dareemi kartaa dharka kala duwan.
Waxaan soo saareynaa badeecado shaqeynaya sida dhar-aan-dhogor-dhireedyo, dhar-aan shiddo ka-dirin, dhar-aan-ka-goyn-xarkaha, antibiyootiga aan-ka-xirnayn, dharka antiist-ka-aan laga tolan iwm ;; Waxaan soo saareynaa daboollada dhirta aan dhogorta lahayn, daboolida ilaalinta dhaxanta, dharka xakamaynta haramaha, dharka qorraxda, bacda nafaqada, iyo bacaha miraha iwm. Alaabooyinkan ayaa si ballaaran looga isticmaalaa beero-daaqa, jardiinooyinka iyo beeraha; Baaxaddayada ugu badan ee dharku waxay noqon kartaa 20 mitir iyadoo la adeegsanayo isku-xidhka ultrasonic iyo isku-dhejinta xabagta leh, kuwaas oo si fudud u qancin kara baahiyaha beerta iyo daaqa.
· Ka baxsiga Beerta
Daboolka Ilaalinta Barafka
Xoog iyo waara:
Dharka dhalaalaya ee ShiningPlast waa mid waara oo xoog badan. Waxaan soo saari karnaa nooca SS sidoo kale.
Culeyska guud ee fudud wuxuu fududeeyaa in la qaado.
Dharka dhalaalaya ee ShiningPlast wuxuu leeyahay WVT aad u wanaagsan. Dhirtu si fiican ayey u neefsan kartaa.
Qalabkayaga loo yaqaan 'UV UV' ayaa la daweeyay, wuxuu ka dhigayaa ShiningPlast Neefsashada dusha sare inay xasilloonaan ku yeelato soo-gaadhista UV muddo-dheer.
Hore: Xannaanada Xoolaha
Xiga: Lumber Warp / Hood
Soo-saarista Dhul-aan-Goyn lahayn oo Joogto ah